Kuomerera pakati kunoshandira Google.
Kubva 2016, pakatanga iyo Pixel yekutanga, yakanzwa kunge Google yaingoda rimwezve gore, uyezve imwe, kuti igadzire zita reimba. Kuonekwa zvakafara sebudiriro.
Uye nekutonga nekukwevedzwa kwePixel mumusika weApple smartphone maererano nenhamba dzayo dzekutengesa, ndingati Google inogona kupemberera kubudirira ikoko. Nhare dzayo dzakafanana nemakamera makuru, ane hunyanzvi uye anobatsira software maficha, uye nekutamba kana nzira dzinoparadzanisa kune smartphone dhizaini.
Asi simba haritengesi mafoni, uye rwendo rweGoogle rweSisyphean kuunza ruzivo rwayo rweApple kune vanhu vazhinji havasati vanyatsoshanda. Pakupedzisira, mafoni ePixel aisazombokwikwidza ne Samsung, LG, Huawei uye OnePlus (pakati pevamwe) pane sheer brute-force specs; uye padivi rekukosha, maPixels anodhura zvakanyanya kukwezva vatengi vanoziva kukosha kwezvigadzirwa zveMotorola neNokia. Sezvo yekare Vanobira vhiri rwiyo anoenda, ivo vakaramba vari pakati newe.
Gore rapfuura, zvakadaro, Google inoita kunge yakawana tsoka yayo ne Pixel 3a, $ 399 handset iyo yakadzokorora kuti kambani inovaka sei mafoni. Kubudirira kwayo, uye Pixel 4 yakateerana 'kutadza kwakatevera, kwakaburitsa pachena izvo zvaida kuitika: sezvo angangoita ese mugadziri we smartphone aikwidza nekukwirisa, achiongorora zvinhu zvitsva, mafomu maficha, uye matekinoroji, Google yanga isiri kuenda chero kupi.
Nhasi, iyo yepakati ndiyo chaiyo iyo Google inoda kuve iri.
Chinonyanya kukosha: Google haina kupfura kwemwedzi, asi yakamhara pakati penyeredzi zvakadaro. Iyo Pixel 5 ndiyo imwe yemhando dzakanakisa uye dzinowanikwa kwazvo dzegore, ichipa vanhu vazhinji zvese zvavanoda uye hapana chavasingaite.
Zvichiri yakanakisa kamera yezvakamira uye ikozvino yakanakira vhidhiyo
Hupenyu hwakanaka hwebhatiri
Inokwezva, yakanyatsovakwa-aluminium chassis
Kuita kwakanaka kwemutengo
Makore matatu ekuvandudzwa kwemwedzi pamwedzi akavimbiswa
Vatauri veStereo vanoodza moyo
Kuratidzira kwakadzima, uye kupenya-auto hakuvimbike
Foni haina Wi-Fi 6 rutsigiro
Pane mutero we5G muUS
Inongowanikwa muhukuru humwe, imwe yekuchengetedza, maviri mavara
$ 700 ku Amazon
$ 700 pa Best Buy
$ 699 paB & H
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Mutengo & zuva rekuburitsa
The Pixel 5 inodhura $ 699 USD uye inowanikwa mumavara maviri, Sorta Sage (girini) uye Just Nhema, uye mune imwe saizi yekumisikidza - hapana Pixel 5 XL gore rino. Iyo zvakare inoganhurirwa kune imwe chete saizi yekuchengetedza, 128GB, isina sarudzo yekuwedzera kuburikidza ne microSD.
Inowanikwa muna Gumiguru 15 munyika nhanhatu - Australia, France, Germany, Ireland, Japan, Taiwan, United Kingdom - uye masvondo maviri gare gare, Gumiguru 29, muUS neCanada.
Ongororo iyi yakanyorwa uchishandisa Canada yakavhurwa Sorta Sage Pixel 5 yakabatana ne5G paTelus, mutakuri wenyika. Yakanga yakabatana neWi-Fi nguva zhinji uye musanganiswa weLTE ne5G kana wabuda mumba. Iyo Pixel 5 inowanikwa muCanada ye $ 799 CAD.
Kuongorora uku kuchavandudzwa apo ini ndinoshandisa foni neinowedzera yekutsanangura, uye shanduko idzi dzinozoonekwa pazvinenge zvakakodzera
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Dhizaini & kuita
kuratidza 6-inch OLED
Yakazara HD + (2340 × 1080)
uchishandisa System Android 11
Kumusoro Kamera 1 12.2MP yekutanga kamera
f / 1.7 mbira
Kumusoro Kamera 2 16MP Ultra-yakafara kamera
f / 2.2 mbira
ndangariro 8GB ye RAM
bhatiri 4,080 naRaama
ndinorova 18Wired wired
5W re reware isina waya
chibatiso Fingerprint sensor
Kubatana Sub-6 5G (pasirese)
mavara Sorta Sage, Chete Dema
miganhu 144.7 X 70.4 X 8mm
uremu 151 magiramu
Iyo Pixel 5 yakagadzirwa nealuminium, iyo yandinonzwa senge ndisina kutaura nezve foni munguva refu kwazvo (ndakusuwa, HTC). Asi iyi aruminiyamu fureni haina kufanana nechinhu chandakambobata kare: musana nemativi zvakapendwa pamusoro neine porous, zvishoma yakakora zvinhu, iyo nekutenda kusvika parizvino yanga ichiramba kukwenya uye zvigunwe zvemunwe.
Kubata iyo Pixel 5 ndechimwe chezvinhu zvangu zvandinoda nezve kuishandisa: inoremerwa zvakakwana, iine huwandu hwakaringana hweheft kuti unzwe wakakura pasina kuremedza homwe yako. Yayo yakatetepa furemu inounza nyaradzo muruoko, saka typing inonzwa yakasikwa uye inowirirana, nepo yakati sandara Corning Gorilla Girazi 6 kumberi inokwidzwa inogara-yakadaro-zvishoma kure nefuremu, ichiona yakasimba matepi pachiratidziri.
Izvo zviyero zvefoni zvakangosiyana zvakasiyana nePixel 3 uye Pixel 4, asi nekuda kwekuvandudzwa kweukobvu uye zvigadzirwa, zvinonzwa zviri nani kwazvo muruoko.
Tiri kutaura mamirimita emusiyano pakati pePixel 5 neayo Pixel 4 uye Pixel 3 yakatangira, asi shanduko diki mune zvinhu, huremu, uye zviyero zvinowedzera kusvika pamusiyano wakakura. Mushure memazuva mashoma, izvi zvakakurumidza kuva yangu yePixel inondida nguva dzose kungotora nekushandisa.
Kumwe kwekurumbidza ikoko kunofanirwa kuve kwakaturatidzwa pachiratidziro, kana zvirinani sarudzo yekubvisa iwo mabheziri kumusoro uye pazasi pechidzitiro. Iine mabhureki madiki pakati peiyo 6-inch AMOLED kuratidza uye furemu, iyo Pixel 5 inotaridzika uye inonzwa yazvino munzira dzayakatangira iyo, uye kuti Google yakakwanisa kurova saizi yakakura kudaro, kunyangwe pakureba 19.5: 9. factor ratio, pasina kuwedzera hukuru hwese hwePixel 3 ne4, inonzwa sekuhwina.
Ehe, izvo zvisarudzo zvinouya nematatu makuru ekutengeserana, uye ini handifare nechero chazvo. Chekutanga ndechekuti iyo Pixel 5 haina kumeso kuvhura uye Soli sensors yePixel 4.
Zvakanaka kuva nesenji yeminwe kumashure, kunyangwe zvikauya pamutengo wekuvhura kumeso.
Iyo yekupedzisira yandinogona kugara nayo - hapana munhu achapotsa Motion Sense, ini ndinovimbisa - asi ndakafunga kuitiswa kweGoogle kwe chengetedzo 3D kumeso kusvinura, uye kugamuchirwa kwakapararira munharaunda yenharaunda, kwakazivisa zvinhu zvakanaka nezveramangwana reiyo Android biometrics. Asi pano isu tinoona Google prevaricate muzita reaesthetics (uye, sekureva kwevatauriri vandakataura navo, kudhura) uye kudzosera kumashure kwekuvhura zvigunwe.
Iyo sensor yeminwe yakanaka mune yakasarudzika nzira, uye inoshanda mushe. Panzvimbo pekushandisa in-kuratidza chigunwe chemunwe, iyo inononoka uye isina kuchengetedzeka, Google yakaita sarudzo yekuisa ruzivo pamberi pe spec, uye mune iyi kesi ndinofunga kwaive kufamba chaiko. Zvakadaro, ini ndicharasikirwa nekukurumidza kukiyiwa kwePixel 4.
Iyo Pixel 3 uye yayo yakanaka pamberi-yakatarisana nevatauri uye mbiri mbiri makamera.
Yechipiri yekutengesa-kurasikirwa kurasikirwa kweiyo yakatambanuka-kona kumberi-yakatarisana kamera kubva kuPixel 3 akateedzana. Ini wakada uku kuwedzera kuPixel mu2018, uye kufunga kuti yakaita foni yakanakisa yekutora selfies, nguva. Gore rakapera, neese ma sensors akatsimbirira pamusoro pePixel 4, Google yakabatanidza iyo 75-degree uye 97-degree minda yekutarisa mune imwe chete-yakafara 87-degree kamera. Iine iyo Pixel 5, iyo yakadzikiswa kusvika 80-madhigirii, saka kana iwe uri mumwe munhu seni anofarira kutora yakafara selfies, shanduko iyi iri kuzonzwa senge kudzoka kwemhando.
Yechitatu yekutengesa, iyo ingangove ichinyanya kukosha kune vamwe vanhu, iko kudzikiswa kwehunhu hwemhando pane apfuura mafoni ePixel. Zvine mukurumbira, iyo Pixel 2 uye Pixel 3 yairatidza maviri akatarisana-akatarisana masipika, uye ivo vaive neruzha rwakakwana, uye kunyangwe bassy yakakwana, kukwikwidza akanakisa muindasitiri. Iine iyo Pixel 5, Google ichiri kuti iyo foni ine maviri masipika, asi iyo yekumberi-yakatarisana chinhu ikozvino yakavanzwa kuseri kwechiratidziro, ichishandisa transducer inoratidzira kuburikidza negirazi.
Izwi iri rakatetepa uye rakanyarara, iro rinomanikidza mutauri akatarisa pasi kuti ashande zvakapetwa kaviri. Vhara icho chiteshi chezasi uye foni haina kana peep, kunyangwe pahuwandu hwepamusoro, uye uchienzanisa kuburitswa kwezwi kuPixel 3 kana Pixel 4, kana chero ipi yemazuva ano mureza kubva kuSamsung kana LG, zvinoita kuti zvive pachena kuti Google yakatora rusununguko ne mutyairi pachawo. Kune boominess kune kurira iyo inoganhurana nekukanganisa, kuvhara midrange uye treble. NdiGoogle mutauri asina kusimba mumakore, uye kuora mwoyo kwakazara.
Kune mashoma chete matambudziko anonetsekana nePixel 5, uye hapana kana imwe yadzo iri pachena.
Ndiri kubvisa aya mabhureki munzira nekukurumidza nekuti iwo ari mashoma uye ivo vari chaizvo pakati peavo chete andinayo nezve foni. Kudzokera kuchiratidziro, iyo 6-inch OLED pani ndeyemhando yepamusoro kwazvo, yakaenzana zvakanaka nemavara-anotaridzika mavara uye kushomeka kwebhanji kana bhuruu tinge iyo iwe yaunowana nemamwe mapaneru mune ino mutengo tier Izvo hazvinyatso kupenya zvakakwana zvekuda kwangu muzuva rakananga - zvirokwazvo kusviba kupfuura iyo Pixel 4 akateedzana - asi ndizvo zvakanaka mune akawanda mamiriro, uye ini ndichatora iko kukanganisa mukutsinhana neakawedzera screen real estate mumuviri mudiki, kunyanya nekukurumidza 90Hz kuratidza.
Pane chikamu changu chakashungurudzika Google haina kuwedzera iyo Pixel 5 yekuvandudza mwero kusvika pa120Hz mushure mekunakidzwa neiyo yekuwedzera silika ne OnePlus 8 Pro uye Galaxy Cherechedzo 20 Ultra gore rino, asi kupihwa maPixel 4's zvakaipa Hupenyu hwebhatiri, ini handishamiswe Google haina kusundira chero maratidziro emetriki.
Ngatitarisei kune imwe nzou iri mumba, danho rekubva pasi kubva kuQualcomm Snapdragon 800-yakateedzana chip kuenda kune iyo Snapdragon 765G iyo Pixel 5 inogoverana neyePixel 4a 5G shamwari (pamwe neOnePlus Nord, LG Velvet uye Wing, nevamwe). Yakapetwa ne8GB ye RAM, ini handingakupomhe nekusahadzika pamusoro pekutaura kweGoogle kuti iyi yepakati-renji chip, ine ingangoita iyo yakafanana komputa simba seiyo Snapdragon 845 inowanikwa muPixel 3, yakanaka zvakakwana kune yayo yepamusoro-ye-iyo-iyo Pixel.
Rega ndiise kutya ikoko kuzorore: iyo Snapdragon 765G yakanaka. Izvo zvakanaka mune imwe nharembozha isu takambozviedza gore rino, uye zvakatonaka pano. Kune akawanda legroom yasara muzuva ranhasi mureza foni machipisi ayo anowanzo kunzwa senge yekare chirevo nezvekuti vanhu vanongoshandisa sei 10% yehuropi hwavo; kunze kwekunge iwe uchibva munzira yako kunetsa foni yako nguva dzose, hapana nzira yauri kutora izere neiyo chip senge iyo Snapdragon 865 mumaoko anodhura anhasi.
Izvi hazvirevi kukumbira ruregerero pamusoro pechisarudzo cheGoogle, chero; Ini kushushikana kwakaedzwa kupenga kwechinhu ichi. Ini ndaishandisa parutivi neparutivi ne Samsung Galaxy S20FE, inova foni inoita $ 699 iyo anoita vane Snapdragon 865, uye iyo Pixel yakaramba ichikwira asi kwezviitiko zvinoverengeka apo maapplication aakatora kurova kwenguva yakareba kuti atakure. (Kune izvo zvakakosha iyo Pixel ine 8GB ye RAM uchienzaniswa neiyo FE's 6GB.) Ini ndakatoiyedza iri padyo neiyo nyowani nyowani $ 749 OnePlus 8T, uye iwe unoziva chii? Zvakaita zvakanaka. Handisi kuti iyo Pixel 5 inokunda neimwe nzira, asi inoramba ichisimuka, uye zvinonakidza.
Iwe unozoona mashoma mashoma apo iyo Snapdragon 765G inosara kumashure kunyange kunyange yegore rapfuura Snapdragon 855: foto yekugadzirisa kumhanya. Nepo makamera, sekuona kwauchazoita anotevera, achiri akanaka sezvakamboita, Google iri kuisa kumanikidza kwakawanda parunhare rwefoni kuti ishandure mafuremu ave mafoto, uye uchaona kuti kudhonza imwe yeaya makomputa-anorema mafoto. inotora mamwe mashoma kurova chaipo mushure mekutora.
Ndakaita zvekutamba mashoma mitambo pafoni, uye zvese kubva kuPUBG Nhare kuenda kune Akafa Maseru kuenda kuOddmar akatamba zvakafanana kune chero mumwe mureza - mushe. Iyo chete ingangove bakoat ndeyekuti nekuti bezels dzakakomberedza foni dzakatetepa, unogona kuzviwana iwe, sezvandakaita, nekubata netsaona paunenge uchizadza Pixel mumaoko maviri.
Chinhu chekupedzisira tisati taenderera mberi: zvinozorodza kubvuma kuti iyo Pixel 5 ndiyo yekutanga runhare runobva kuGoogle pasina chero nyaya dzekuratidzira pakutangisa. Mushure mekutanga kwePixel's software bugs, iyo Pixel 2 XL yekuratidzira matambudziko, iyo Pixel 3 yekurangarira nyaya, uye nePixel 4 hupenyu hunotyisa hwebhatiri, zvinonyevenutsa kuona Google ichiburitsa chigadzirwa chisina mutambo. Iyi foni inoshanda, uye inoshanda sezvainofanira.
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Cameras
Zvikamu zvechikamu chino zvakanyorwa na Hayato Huseman
Pixels makamera kutanga. Iyo yanga iri tsumo kubvira iyo Pixel 2 uye ichiri kuenderera kuve izvozvi izvozvi. Asi iyo kambani payakaratidza kuti yaigona kutakura huwandu hwayo hwekuita kwayo kamera kune iyo $ 399 Pixel 3a mu2019, mubvunzo uri mupfungwa dzangu wakava, zvine kamera yekamera zvine basa here?
Mhinduro iyoyo nePixel 5 iri… yakaoma. Foni ine imwecheteyo 12.2MP yekutanga sensor iyo mafoni ePixel ave nayo kwemakore mana, asi zvakare Google yakabvisa pombi yekuburitsa kuti igutse izvo vashandisi vari kushuvira nhasi: zvakasiyana, zvinodziya mafoto ari nyore kugovana pasocial media. Iko kugadzirisa kuri kuchenjera asi kugamuchirwa, uye ini ndichiri kufarira mapikicha ari paPixel 5 zvirinani pane chero chero chimwe chigadzirwa. Asi zvakare zvakajeka kuti Google yakarova iyo software muganho weiyo ino diki foni sensor inogona kuburitsa mu Hardware.
Mukukudzwa kwayo, Google haina kugadzirisa zvisina kuputswa: mumwenje wakanaka, mafoto akatorwa paPixel 5 anonyanya kufanana neayo ePixel 4. Yese-inodziya-zvishoma, sezvakataurwa, asi iwe wakunda ' c cherekedza mutsauko kunze kwekunge iwe uchitsvaga iwo. Zvinorevei izvi kuti urikuwana pakati peakanakisa, emhando yepamusoro pikicha mhando mune chero mamiriro emwenje uye yechinhu chipi zvacho.
Portrait mode kuenzanisa: Pixel 5 (kuruboshwe) | Pixel 4 (Kurudyi)
Kunyanya, Google inotarisira kuchengetedza ruzivo rwechiso mumifananidzo; hazvibvise mumvuri ruzivo kuti uwane yakajeka mufananidzo; hazviwedzeredza kuzadza kwemavara kana iwe uri kutora pikicha yekudya kwako kwemanheru; uye kunyangwe iri zita, HDR + haigadzikise nharaunda kutarisa katuni kana kunyepa. Zvinogona kunge zvisinganzwike kunge zvakawanda, asi iwe unogona kutora seyakareruka kugadziriswa kweGoogle kuchaita sarudzo dzakakodzera, kubva pakuratidzwa kusvika pakupesana kusvika pakuzadza kusvika pakujekesa kune chikamu, munenge munzvimbo dzese.
Pane mashoma ekuvandudza ekucherechedza gore rino pamusoro pePixels dzapfuura. Google yakawedzera Night Sight kune huru kamera modhi, zvinoreva kuti hauchazofaniri kumisikidza iyo Pixel's yakaderera-mwenje mode kuti uwane zvakanyanyisa kubva kupfuti yako. Google yakandiudza kuti zvainge zvakaoma "kuita izvi nemazvo, pamwe kubvira pakutsvaga iyo" yakajairika "yakawanda-furemu kutora mafoto, sezvinoitwa neGoogle, uye iyo" yakatambanudzwa "yakawanda-furemu kutora mifananidzo ye Night Sight kunonetsa kupfuura tinoziva. Chero nzira, iko kuzorodza kusatove nebasa nekuchinja husiku maitiro, uye iwo mafoto pachawo anotaridzika zvirinani kupfuura nakare kose.
Unhu hwemifananidzo hausi nani kwazvo paPixel 5 kupfuura maPixels ekutanga, asi iwo anodziya zvachose, uye mapikicha ane mwenje mushoma haana ruzha.
Ndizvozvo: Google zvakare yakwanisa kugadzirisa ayo mashoma-mwenje mhedzisiro vachishandisa imwecheteyo sensor uye lens musanganiswa segore rapfuura. Iyo kambani yakati yakagadzirisa paNight Sight algorithms iyo inobvumidza iyo kudzora ruzha zvakanyanya, kuchengetedza ruzivo muzvidzidzo, uye kuona kuti mavara ari echokwadi. Mukuyedzwa kwangu, mhedzisiro yacho yainge yakafanana nePixel 4 munzvimbo dzechiedza chidiki - kunze kwehusiku nenyaya ine mwenje wemugwagwa kana mwedzi - asi zvikuru zvirinani mune yekupedzisira-yakaderera mwenje, senge mune yakadzika-nhema imba. Iyo Pixel 5 yakaita basa riri nani rekuchengetedza rinotarisa pane chidzidzo uye kuchengeta ruzha pasi. Ehezve, zvichipiwa kuti kuvandudzwa uku kunonyanya kukonzerwa nesoftware, vanofanirwa kuuya kumaPixels ekare mune ramangwana kamera yekuvandudza.
Husiku Sight kuenzanisa: Pixel 5 (kuruboshwe) | Pixel 4 (pakati) | Samsung Galaxy S20FE (Kurudyi)
Iyo Pixel 5 inobatsirawo kubva kuhusiku Sight portraits, uko foni inokwanisa kuona yepamberi chidzidzo zvakanaka zvakakwana kuti chiveve icho uye chikanganise kumashure. Ini ndaive nemhedzisiro yakavhenganiswa pano, uye budiriro yaive yakatarwa zvakanyanya neyakawanda sei mwenje wepakati waiwanikwa kune iyo sensor. Kana iwe ugere mukamuri yakavhenekwa nemabhuru mashoma, Night Sight portraits inofanira kubuda zvakanaka; panze, kana mumakamuri ane mwenje mushoma, ndaingorega Nguva Dzese dzeusiku dzichiita chinhu chadzo.
Iyo Pixel 5 zvakare inodenha zvinhu zvitsva zveGoogle zvePortrait Mwenje, izvo zviri munzvimbo mbiri: iyo kamera kamera pachayo uye, panguva yekumashure-kugadzirwa, muGoogle Mifananidzo app. Izvo zvakakosha kuti uite uyu mutsauko, sekuvhiringidza sezvazviri, nekuti chete iyo Pixel 5 izvozvi inobatsira kubva kune ese ari maviri.
Hechino chiyeuchidzo chePortrait Chiedza paPixel 5, iyo ini yandinofunga kuti inonakidza uye isina kuiswa pasi. Mhedzisiro yacho inogona kuve yakajeka kana isinganetsi, asi haiwanzo kuyambuka tambo kuita artifice, uye ndiko kune chikwereti chikuru cheGoogle. pic.twitter.com/ga7XhC7FFj
- Daniel Bader (@journeydan) October 14, 2020
Portrait Chiedza haisi pfungwa nyowani; iyo iPhone X yakatanga ma-pre-makedheni Portrait Lighting mhedzisiro, seStage Mwenje, Contour Chiedza, nevamwe. Asi Google inoendesa zvinhu padanho nyowani uye inokwanisika kuwana, sezvo zvichikwanisika kuita maviri akakurumbira masitaera, danho uye contour, pasina kuyedza kushoma.
Kutora pikicha muPortrait Mode inogonesa Portrait Chiedza uye kuchigadzirisa kusvika padanho Google inofunga chakakosha pachiitiko (Google inoti inoshandisawo Chiedza chePortrait kumeso akatorwa munzira yakajairwa, asi padiki padiki). Mhedzisiro yacho inogona kunge ichiratidzika, zvikuru nekuti kuvhenekera zviso zvisiri zvekuita kune hunyengeri (kana iwe wakambove nemifananidzo ye studio yakatorwa, kana kutarisa kumashure-kwezviitiko zvevhidhiyo yeYouTube, iwe unoziva kuti yakawanda sei michina inobatanidzwa) uye maseru enhare anowanzo diki kwazvo kutora data rakaringana kuti riitwe achiwedzera vhenekera nzvimbo yebenzi.
Portrait mwenje pa 0% (ruboshwe), 50% (pakati) 100% (Kurudyi)
Asi seGoogle zvayakabudirira kuratidza neHDR + munzvimbo dzenzvimbo, uye Husiku Kuona munzvimbo dzine rima, inogona kushandisa muchina kudzidza kuverenga chiyero chakaringana chechiedza kuwedzera kumeso pasina kuita kunge kwekunyepedzera. Kazhinji yenguva, zvinongoshanda. Uye kana usiri kufara nazvo, unogona kupinda mu Google Photos app uye nekuchinja hukasha hwechiedza kana panogara mimvuri.
Ini ndaigara ndichifadzwa nePortrait Chiedza uye kuchinjika kwayo. Tichifunga kuti mafoni ePixel atotora akanakisa emifananidzo mapikicha muiyo ecosystem yehukama nekukwanisa kwavo kuchengetedza kumeso kwechiso pasina kuwedzera, Chiedza chePortrait chinongosimbisa icho chinotungamira.
Hechino chikamu chinovhiringidza: sechikamu chekuvandudzwa gare gare gore rino, iyo Pixel 4, 4 XL, uye 4a ichawana kugona kuisa Portrait Mwenje mu-kamera. Panguva imwecheteyo, Portrait Mwenje yekugadzirisa yemifananidzo iripo ichauya kune ese maPixels kutanga nePixel 3.
Iniwo ndinofanira kutaura kuti, kunyangwe paine zvichemo zvangu pamusoro penzvimbo yakatetepa yekuona, iyo selfie kamera paPixel 5 ichiri chimwe cheakanakisa mune bhizinesi. Yese nzira inowanikwa kumakamera ekumashure - Night Sight, Portrait, uye Portrait Night Sight, uye Portrait Light- iri kumberi, asi vhidhiyo kutora inongogumira ku1080p.
Kumwe kunhu mukamera, kune zvimwe zviviri zvinowedzerwa uye kumwe kubviswa kunokosha kutaura nezvazvo. Kwakaenda iyo 2x telephoto lens yePixel 4, yakatsiviwa ne fan-service Ultra-wide lens. Nei isina Google chete wedzera Yakazara-yakakura nzira iyo Apple yakaita neiyo iPhone 11 Pro? Ndiani anoziva - mutengo ungangove wakanyanya kuita chinhu - asi chinonakidza uye chinogamuchirwa shanduko zvakadaro.
Kufananidza urefu hwekutarisa hwePixel 5 pakati peyakajairwa (kuruboshwe) uye malenzi akareba (kurudyi)
Google inoruramisa shanduko ichiti iyo Pixel's Super Res Zoom chimiro chakaringana zvekuti, pa2x, haugone kuudza mutsauko pakati pePixel 5 nePixel 4, izvo zvisiri zvechokwadi. Mifananidzo yakapfurwa pa2x paPixel 5 ine zvakawanda zvishoma ruzivo uye kazhinji inotaridzika yakawanda yekugadzira - zvimwe digitaalinen - pane iyo Pixel 4. Inoita pfungwa. Asi ndingaite here kuti ndive neultrawide yeinoshamisa nzvimbo mapfuti pane kudzikiswa kweterephoto zoom mhando? Zvakanaka.
Iyo yekupedzisira-yakafara lens paPixel 5 haizohwina chero mibairo yehunhu, kupinza, kana kudzikisira mukukanganisa kwedhiramu, asi iko kuwedzera kwakanaka kune iyo Pixel kamera arsenal, uye yakatora nguva yakareba. Google yakaita basa rakakura kuyera iyo yakasara-yakaenzana kuti ifananidze iyo sainzi yemavara yeiyo yekutanga sensor, uye pane zvese zvinonakidza kushandisa.
Ipapo pane vhidhiyo. Iwo maPixels akave akarondedzerwa nenzira kwayo nekuda kweiyo yavo yekushomeka vhidhiyo, uye sekufona kweiyo Ultra-yakafara kamera, Google yakashandisa imwe nguva yekugadzirisa zvinhu pano.
Pane zvakawanda zvekutaura nezvazvo maererano nePixel 5's vhidhiyo kugona. Iyo Pixel 4 yakapfura yakanakisa yepakati vhidhiyo, ine ingangoita zero kutonga kana marongero kuti tweak, saka ani kuvandudza kunogamuchirwa pano.
Izvo zvese zvinoshanduka nePixel 5. Sezvingatarisirwa, unogona kupfura mune chero 1080p kana 4K pa30fps, asi ikozvino pane 60fps sarudzo, futi. Google haisi kuita zvekutenderedza pano, chero: 4K60 vhidhiyo iri buttery yakatsetseka, uye zvakangodzikama sevane 1080p60 kana 4K30 vamwe.
Iyo Pixel zvakare inokwereta ficha yatakaona mune dzazvino mafoni kubva kuSamsung, LG, uye nezvimwe: odhiyo zoom. Nezve izvi, iyo Pixel 5 inoshandisa ayo akasiyana mamikisi kutarisisa mukati uye kusimudzira odhiyo kana iwe waswededza mune imwe nyaya, uchidzora kumashure kumashure ruzha rwakakomberedza.
Chinhu chinobatsira, kana chiri gimmicky, asi izvo hazvisi izvo zvega chinhu chitsva.
Zvinotonyanya kukosha ndeye itsva vhidhiyo yekusimudzira modes; pamusoro peyakajairwa mamiriro, ayo anoshandisa musanganiswa weEIS uye OIS kudzikamisa kupfura kwako, unogona ikozvino kusarudza kubva kuLokedhi, Inoshanda, uye Cinematic Pan, imwe neimwe iine zvayakanakira nezvayakaipira.
Iko hakuna telephoto lens pane iyo Pixel 5, asi iyo rakakiyiwa kupfura modhi zvibhakera kusvika ku2X zvakadaro, uye inoshandisa iyo yakapoteredzwa data pamwe nekudzikamisa kugadzira "yakavharirwa" pfuti, zvinoita sekunge iwe waipfura netripod. Izvo zvinoshanda zvinoshamisa mushe pakubvisa chero majee emaoko, kunyangwe kana iwe uchikachidzira chaizvo, unogona kutanga kuona maonero ekugadzirisa kurwa mumakona.
Anoshanda maitiro kazhinji inoita kunge yakasimba vhezheni yeyakajairwa kudzikiswa. Iyo yakasarudzika yekufamba kupfura uye chero ipi mhando yechiito nguva; Google inoratidza kupfura kubva kujeti ski mu software yekamera.
Iwe unogona kupfura chero kupi kubva pa1X kusvika ku5X mune iyi modhi, asi zvisingaite, iyo Pixel 5 inonyatso zembera pane iyo Ultra-yakafara lens yemhando iyi yekupfura. Nekuda kweizvozvo, iyo mhando yemhando yacho inonyorova zvakapusa kupfuura mune mamwe maodhi, uye iwe unogumira kune chete 1080p, pane 4K.
Google inoti izvi imo nekuti nzvimbo yakakura yekuona kubva kukamera yekupedzisira inobvumidza goho rakakura kupfuura iro rekutanga, ichipa iyo kambani kudzikamisa algorithms yekuwedzera yekufema imba yekushandisa mashiripiti avo.
Mukuita, nekuda kwekudzikiswa kwakanyanya kwehunhu hwevhidhiyo, pamwe ndinonamira neyakajairwa modhi kunze kwekunge uri kwazvo kufamba nekukurumidza, asi isu tichaita yekuwedzera kuyedza uye kugadzirisa izvo zvekuongorora
Ini ndinofunga chandinofarira nyowani yekupfura mode ndeye Vadivelu Comedy Cinematic Pan, iyo inongopfura mu60fps, yobva yadzikira uye inogadzikisa tsoka dzako kuti igadzire yakatsetseka-yakatsemuka 30fps clip. Icho hunyengeri ini ndaiwanzoita nguva dzese kana ini ndaive ne4-inokwanisa kamera, nekuti inokutendera iwe kuti ugadzire yakareba, inodzikama mifananidzo munguva pfupi yenguva. Mhedzisiro yacho inotaridzika - ingo rangarira izvo kwete chinhu chose inoda kunonoka-mo. Shandisa iyi modhi zvishoma.
Pakupedzisira, iyo Pixel 5 ichiri kuenda kwete kumusoro mafoni senge Xperia 1 II, LG V60, uye Galaxy Note 20 Ultra kana zvasvika pavhidhiyo. Imwe yeaya mafoni ane akawanda manongedzo ekudzora pane zvinopihwa neGoogle, kusanganisira kugona kupfura mune akasiyana maprofiles emifananidzo uye kuseta manyore kutarisisa. Asi tichifunga nezve kumashure kwePixels dzakapfuura, iri danho rakakura mukupa iyo Pixel 5 chiitiko chakapoteredzwa zvakakwana, pane kungoita kamera yakakura kwazvo yemifananidzo.
Ukuwo, pikicha yePikisi ichiri kutungamira haisisina chokwadi, zvimwe. Iyo Pixel 5 inotora zvisingaite mapikicha mune angangoita ese mamiriro emwenje, asi 2020 yakaratidza kuti kukanda mapikisheni padambudziko - iyo microscopic mhando - inoshanda chaizvo. Nhare dzakadai seSamsung Galaxy Note 20 Ultra uye OnePlus 8 Pro ine masvomhu akakurisa epamusorosoro, aine makomba anowirirana kuti aenzane, uye nepo pasina kana kambani iri nimble seGoogle mukushandisa software kugadzirisa matambudziko ane chekuita nehardware, vava kuswedera padhuze . Muchokwadi, zvinoita sekunge wese mugadziri wefoni ari kuvandudza nekukasira kupfuura Google, uye mune dzimwe nzvimbo vakaipfuura nekungoshandisa ma sensors mahombe, azvino uno.
Mushure mekutarisa Apple's iPhone 12 kuvhurwa chiitiko svondo rino, uko kambani yakaburitsa imwezve hombe yekutanga sensor yeayo iPhone 12 Pro akateedzana pamwe nehumwe hwakawanda hwekuvandudzwa kwekamera, zvichave zvinonakidza kuona kana kubviswa kweGoogle kwenzvimbo yepamusoro kunoguma kurasikirwa kwayo nekorona yekutora mifananidzo.
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Battery upenyu
Gore rapera, ndakati iyo Pixel 4 yaive "kutanga kurara, kukurumidza kupera. ” Iyo Pixel 4 XL yaive "kamera yekuona husiku yakafa nekuvira kwezuva. ” Ose ari maviri aive mafoni akakomberedzwa zvachose nehurombo hupenyu hwebhatiri, zvakaringana kuti Google Hardware mukuru Rick Osterloh akaita shanduko yesimba mukati mePixel Hardware timu kuona kuti izvo hazvina kuitika zvakare.
Ichokwadi maererano neshoko rayo, iyo Pixel 5 inogadzirisa iyo nhamo yebhatiri. Iko kune 4,080mAh bhatiri mukati mefoni, iri 46% yakakura kupfuura iyo 2,800mAh sero muPixel 4, uye yakatokura kupfuura iyo iri mu4 XL. Iyo inyanzvi yeinjiniya iyo Google yakwanisa kuwana bhatiri rakakura kudaro mufoni iyi, uye yakashanda: Handina kumbopedza zuva riine pasi pe10% bhatiri mumazuva angu mashanu ndichiedza iyo Pixel 5, uye imwe neimwe yaive neanopfuura maawa mashanu echiratidziri- nenguva.
Dzimwe dzeiyo yekuwedzera nguva yekuwedzera inofanirwa kuve yekutenda kune kugona kweiyo iyo Snapdragon 765G; zvimwe nekuda kwekuvandudzwa kusiri pachena kweAdaptive Bhatiri yakaunzwa kutanga kwegore rino muPixel 4a. Asi zvakanyanya imhaka yekuti Google yakaita sarudzo chaiyo yekuisa honi hombe muhoni ine rakadzikira 1080p AMOLED pani.
Google yakawanawo imwe yekuwedzera ace kumusoro kwayo, asi ndinobvuma kuti handina kuishandisa kupfuura maminetsi mashoma svondo rino: Yakanyanya Bhatiri Saver. Kutora zvirevo zvePixel yakajairwa Battery Saver modhi uye kuibatisisa kusvika gumi nerimwe, Zvakanyanya Bhatiri Saver rinobvisa mapurogiramu kubva mukuita chinhu kumashure. Ivo vari kungoshanda chete kana iwe uine ivo vakavhura pamberi pako.
Izvi zvinoreva kuti email kana vatengi vekutaurirana havangasundire mitsva meseji, uye akakosha kumashure masevhisi se Covid-19 Ratidziro Yekuzivisa haishande nemazvo kunze kwekunge yakacheneswa. Mhinduro yakasimba kuchinetso chehurefu hwebhatiri, uye nepo ini ndichifungira kuti ichashandiswa zvakanyanya muhomwe dzevanhu vanobhadharisa manheru ega ega, zvakanaka chaizvo kuva nazvo.
Zvakare zvakanaka kuve nechaji isina waya, chinozadzikiswa Google chakaitwa kuburikidza nealuminium furemu nekuveza chaiko gomba muhombodo. Iwe zviri pachena haugone kutaura kuti gomba riripo - rakazadzwa neine resin uye rakazopendwa pamusoro - asi iri injinjini feat zvakafanana. Kuchaja isina waya uye kurwisa mvura yaive maviri maficha andakarasikirwa chaizvo kubva kuPixel 4a, uye ndinofara kuti vari pano.
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Software
Pane software pamberi, pane zvishoma chete zvinhu zvakakosha zvaunofanira kuziva: iyo Pixel 5 inouya nemakore matatu ekuvandudza (kunyangwe iri anofanira kuva mashanu) nechero pamwedzi chengetedzo zvigamba uye nekota (ish) "Feature Madonhwe."
Uye zvese izvo zviripo izvozvi zvakasarudzika nePixel 5 uye Pixel 4a 5G inozopedzisira yauya kune akura maPixels, uyezve zvingangoita kune mamwe mafoni gare gare, futi. Ndiwo maratidziro eanenge ese mapikicha-akasarudzika maficha uye pamwe haizoshanduke nechizvarwa chino.
Ehezve, iyo Pixel 5 ngarava ine Android 11, inova nzira isinganzwisisike pamusoro peiyo Android 10 iyo zvisinei inogadzirisa yakawanda yematambudziko mashoma ane chekuita nekudzokorora mabasa pane imwe smartphone.
Nhaurirano izvozvi dzave nenzvimbo yadzo mudhiraivho yekuzivisa, uye dzinogona kushandurwa kuita mabhuru madiki anoyangarara achitevedza mativi echidzitiro. Mvumo-yekushandisa-imwechete inoreva kuti haufanire kushamisika kana maapplication ari kutora chako chega kukwira. Gboard mu Android 11 inosanganisirwa nevatungamiriri vephasiwedi uye Smart Pindura, ichiita kuti zvive nani kushandisa. Iyo nyowani yemagetsi bhatani menyu inokutendera iwe kudzora yako smart imba kana kubata makadhi echikwereti. Uye yakagadziridzwa skrini yekufambisa uye yekuzvarwa screen rekodhi inoita kuti Google vhezheni yeApple inzwe zvakanyanya seyaSamsung kana yeHuawei munzira dzakanakisa dzinogoneka.
Kune akatiwandei anonakidza ePixel 5-chete maficha anowanikwa izvozvi. Iyo yakagadziridzwa vhezheni yeRecorder app ikozvino inoita kuti iwe ugadzirise zvikamu zvekurekodha na kubvisa zvinyorwa zvakagadzirwa. Ndiri kukoshesesa izvo nekuti zvakanyanya kutonhora. Google ine chivimbo kwazvo mukunyorwa kwayo kwakaringana zvekuti iri kuda kuishandisa kudzosera injinjini fomu. Zvinoshamisa chete.
Zvakare zvakatsvinda, kunyange chimwe chinhu chisina munhu ane Pixel yaigona kuyedza panguva ino, ndizvo Ndibate, sevhisi inobvumira Google's Duplex AI kushandisa nguva yakamirira mumiriri wevashandi panzvimbo yako.
Google's Pixel software ruzivo harukoshesi. Kunyangwe makambani akaita seSamsung, OnePlus, OPPO, uye nevamwe zvishoma nezvishoma vakasvika pakuziva kuti kupfava uye kuyerera zvinogara zvichisarudzika kune mushandisi we smartphone pane kuwanda kwesarudzo, Google ichakamira yega mukuyedza kutumira maficha panzvimbo yesarudzo.
Mushure memakore gumi eNexus nemaPixels, zvinogona kuita senge ndezvekuzvitaura, asi haunyatsonzwisisa kuti zvinonakidza sei kushandisa Android paPixel kusvika iwe watoshandisa imwe.
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Iwe unofanirwa here kuva nehanya ne5G?
Imwe yemarquee maficha ePixel 5 itsigiro ye5G. Muno muCanada, vatakuri vedu vanoshandisa sub-6Ghz 5G, iyo inopa foni kumhanya zvakapusa zvakaenzana nehunhu LTE kubatana. Izvo zvakati, ndakachengeta yakasimba 5G yekubatanidza iyo nguva yese yandaishandisa iyo Pixel 5, uye chiitiko chacho chakange chakasimba mukati mese. Pa $ 799 CAD, ichi ndicho chakanakisa kukosha mumafoni e5G pamusika kunze kwePixel 4a 5G.
MuUS, zvinhu zvakati siyanei: iwe uri chaizvo kubhadhara mari yepamberi kutenga foni inosanganisira Verizon's millimeter-wave 5G bhendi, iyo inokanganisa imwe yeiyo kukosha iyo Google iri kuyedza kuwana, kunyanya kana iwe usiri kuronga kushandisa foni pane iye anotakura.
Uye nguva Verizon iri kuwedzera yayo 5G network zvakanyanya vhiki ino, uye Google ndeimwe yevakashanda navo kwenguva yakareba, ichiri kushungurudza zvishoma, kunyanya kana iwe uchiziva kuti foni inogona kuenda neUS $ 100 zvishoma (ndizvo zvinoita chiyero chekuchinjana kana iwe uchinge wawana mutengo wePixel 5 mu nyika uko mmWave 5G hachisi chinhu).
Usatenge foni iyi nekuti ine 5G; chitenge mukati zvisinei Ye5G.
Ehezve, 5G chido ive yakakosha mune ramangwana kunyangwe isiri nhasi, uye kuvapo kwayo kuchave kuri kutengesa chinhu kune zvishandiso kuburikidza nesimba rekushambadzira zvichaita - wese mutengesi wefoni, mutakuri, uye chipmaker anga achirova kukosha kwayo kune ramangwana rekufamba , kunyangwe chokwadi ichocho chisati chaitika. Panguva ino, ndingati kuwedzerwa kwe5G muPixel 5 zvakaipa zvakaipa; iyo Google yakasarudza kugadzira imwe vhezheni yefoni yeUS uye nekuwedzera mutengo ne $ 100 nekuda kwayo, kwaive kufamba kusiri iko.
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Mheni inotenderera FAQ
Unogona kutenga izvi pamusoro pePixel 4a 5G?
Ndanga ndichifunga nezvemubvunzo uyu nguva pfupi yapfuura, kunyanya zvine chekuita nekuti iyo Pixel 5 inopa kukosha kwakaringana kururamisa mutengo wayo we $ 699, uye ndasvika pamhedziso yekuti zvese zvinoenderana nekukosha kwaunopa kune vamwe yeiyo Google idiki diki yemhando-ye-hupenyu hunovandudzwa, senge iyo aluminium furemu, sePixel 5's IP68 mvura kuramba, uye pamwe zvakanyanya kupfuura zvese, waya isina waya.
Ini ndinofunga kuti vangangove vePixel 5 varidzi vangashandirwa zvirinani kana paine maviri maBhaibheri, imwe iine sub-6 5G pa $ 699 uye yeVerizon-yakanangana modhi ku $ 699, yakafanana nekuparara pakati pePixel 4a 5G mamodheru.
Izvo zvakati, sezvakataurwa naHayato mune yake Pixel 4a 5G ongororo, iri runhare rwakakura rwakapendwa kukona nePixel 4a uye Pixel 5. Pamadhora mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemana iri mhando yekutengeserana, asi haichemedzeri iwe ne ukoshi kufanana ne4a kana zvinhu kufanana nePixel 5.
Saka ini pakutanga ndakanyora kuti izvo haptics hazvina kuchinja kubva gore rapfuura, asi ini ndakakanganisa nezvazvo. Pane zvishoma musiyano wehunhu pakati pePixel 3 ne4, iyo yaive yakachena uye yakanyatsoita haptics, uye iyo Pixel 5, iyo ichiri yakachena asi zvishoma zvishoma zvishoma kupfuura makore apfuura. Haisi iyo kura dhiri - zvakanditorera mazuva mashoma kuti ndizvizive - asi zvirokwazvo haisi mota yakafanana neyaPixel 4, zvinoodza moyo.
Mutauri-kumashure-kwe-kuratidza anoshanda sei?
Iko kune mutengesi kuseri kwepaneru reOLED inodedera iyo skrini yese, ichikonzera kuti ibudise ruzha. Sezvo ini ndanyora pamusoro, ruzha rwacho rwakaonda uye runoenzanisira muyero wevatauri ve stereo, asi chakanakira ndechekuti iwe unogona kuisa nzeve yako chero papi pagirazi uye unzwe anofona kune rumwe rutivi rwefoni. Ini zvirinani kuve neakakodzera kumberi-akatarisa mutauri / musoro, asi iyi haisi mhinduro yakaipa
Inodzosera kumashure waya yekuchaja inoshanda sekushambadza?
Yep, seSamsung's Wireless PowerShare inoda kuburitswa pachena (uye ini ndinokurudzira kushandisa tira nekukurumidza kuti uite izvozvo), asi kana yavepo unogona kudzosera foni nekuisa peya nzeve kana smartwatch inogoneswa neQi (kana imwe runhare, kana iwe uchikarira zvakadaro), uye inobhadharisa. Kusvika pa5W yakakwira, zvakadaro, saka usatarisira zvishamiso.
Rakadii Sorta Sage ruvara?
Ndinofara iwe wakabvunza: ingangove yangu inofarira foni kara ... pamwe zvakamboitika? Ndinoda, ndinoda, rudo it. Green iri mukati megore rino, pakati peiyo Samsung's Mystic Green pane iyo Galaxy Note 20 kuMint Green pane Galaxy S20FE kune iyo nyowani Aquamarine Green pane iyo OnePlus 8T.
Riri sei riri repamutemo Jira Nyaya?
Kunge ese maPixel kesi mumakore achangopfuura, haisi iyo yakanakisa Pixel 5 kesi, asi zvakanaka. Iyo inouya mune akasiyana mavara, uye Google yakanyatso kuroverera iyo kukwana uye kupedzisa; chinhu ichi chinokwana segirovhosi pasina kuwedzera yakawandisa huwandu. Chandinonyanya kukoshesa ndechekuti machira anogona kutora matinji uye kunhuhwirira zviri nyore, saka iwe uchazoda kungwarira nezve kuichenesa nemvura ine sipo painobata chimwe chinhu chisingatarisirwe.
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Mutambo
Iko hapana mubvunzo kuti iyo Pixel 5 iri kutanga mu chaizvo pamusika pakazara vanhu, pamwe panguva yakashata yegore kuburitsa foni. Apple's kusunungura iPhones ina nyowani mukati memavhiki mashoma, kusanganisira chitsva iPhone 12 mini iyo inotanga pamutengo mumwe chete we $ 699 sePixel. Uye Samsung yakangoburitsa yakanyanya kunaka Galaxy S20FE, Ukuwo OnePlus 8T inopa yakawanda kukosha kwe $ 50 chete, pa $ 749.
Mumakore apfuura, isu takamanikidzwa kumisikidza maPixels kurwisa nhare dzakanakisa kubva kuSamsung, Apple, Huawei nevamwe, uye chibvumirano chakada kupatsanurana pamwe nemitsara yekukanganisa mitsara: kana iwe uchikoshesa simba, enda kune imwe mhando; kana iwe uchikoshesa finesse, tora Pixel. Gore rino, iyo Pixel 5 inokundikana kufambisira mberi zvinhu pane tekinoroji kumberi - kutaura zvazviri, iri kunyanya kudzora - saka iri kuzendamira zvakanyanya pane finesse kupfuura nakare kose. Asi kunyangwe iyo nyaya inoshoreka zvishoma neakanaka Pixel 4a uye Pixel 4a 5G, nhare dzinodhura $ 350 uye $ 200 pasi pePixel 5, zvichiteerana.
Pa $ 699, zvakanyatso kuoma kuita iyo kesi yePixel 5, kunyangwe mushure mekunge ndamhanyira pamusoro payo kutukwa padyo nemazwi e6,000. Iyo iri nyore foni kuda asi yakaoma kuikurudzira mukutarisana nemakwikwi akaomarara akadaro.
Ongororo yeGoogle Pixel 5 Unofanira kuitenga here?
Pixel 5 ndeyani?
Mumwe munhu anoda smartphone kutora mifananidzo. Iyo Pixel ndeyechokwadi kamera yekutanga, uye kunyangwe isina kuita kukwakuka kukuru pamusoro pePixels dzakapfuura, iyi ichiri yakanakisa kutora mifananidzo ruzivo musi Android.
Mumwe munhu anongoda kuita kuti zvinhu zvive nyore. Icho chiitiko chePixel hachifananidzwe, uye pane chimwe chinhu nezve kushandisa iyo inonzwa kuyerera uye yakasikwa.
Mumwe munhu anokoshesa kuchengetedzeka. Pixel mafoni ndeekutanga kugamuchira nyowani mapuratifomu uye ekuchengetedza zvigamba, uye iyo Pixel 5 ichagamuchira makore matatu eese.
Ndiani asiri Pixel 5 ya?
Mumwe munhu anoda eazvino uye akakurisa maspec. Iyo Pixel 5 iri muchikamu chakasiyana kupfuura maPixels apfuura uye haisi kuyedza kukwikwidzana neyeazvino iPhone Pros uye mamodheru eGlass S epasirese. Iyi iri yepakati-renhare foni ine mutengo wekuenzanisa.
Hazvina kuoma kufonera Pixel 5 iyo yakanakisa Pixel nakare kose. Iyo inogadzirisa dzinoverengeka dzenyaya dzakasimudzwa mune yakashata-asi-yekuda Pixel 4 mutsetse ichiri kuunza zvechokwadi zvechokwadi, anobatsira kamera maficha, kunyange mazhinji acho achizonyura pasi kune akura maPixels. Inogona kunge iine mashoma ekudzikisira pamusoro pePixel 4, kunyanya mune yekumhanyisa mhanyisa uye biometrics department, asi iyo bhatiri yekuvandudza ndega inogadzirira iyo.
Kana iwe uri mumusika kuti uvandudze foni yako gore rino uye usingade kupinda mumatare anokatyamadza e $ 1000 + mafoni, unogona kuita zvakatonyanya kupfuura iyo Pixel 5. Asi haisisiri mukundi akajeka mukati ani chikamu - kwete pamutengo, kwete software, kwete yekuita, uye kwete kunyange yekamera. Panzvimbo iyoyo, inogara padhuze nepamusoro padzo dzese, ichibatana muchiitiko chandinofarira pamusoro pedzese nhare dzeApple. Musiyano wegore rino ndewekuti kune akawanda akanaka dzimwe nzira pane angangoita ese mamwe mitengo poindi - maviri acho akagadzirwa neGoogle pachayo.
Pakutanga gore rino, takanzwa mushumo kuti Google yakadzikisa zvakanyanya mapikisi ekutengesa ePixel. Iyo zvakare yakadzikisira pasi chishuwo chemafoni ayo matsva, ichivasiya vakaenzana pakati pepaketi uko vane mukana wakanaka wekukwikwidza.
Asi kubva pakuona kwangu, kuva nemutsetse kubva pa $ 349 Pixel 4a kuburikidza ne $ 499 Pixel 4a 5G kuenda ku $ 699 Pixel 5 zvinoreva kuti iwe unogona kuwana foni yeGoogle ine makamera anoshamisa uye mabhatiri akanaka kwazvo, pamwe nezvose izvi zvinobatsira zve software uye zvigadziridzo zvenguva dzose. , pasina kushandisa mari yakawanda.
Kana iwe ukaitika kuti usarudze iyo Pixel 5, izvo zviri kungo vimbisa kuti iwe uri kuwana iyo yakanakisa Pixel zvachose.
Google haina kupfura kwemwedzi, asi yakamhara pakati penyeredzi zvakadaro. Iyo Pixel 5 ndiyo imwe yemhando dzakanakisa uye dzinowanikwa kwazvo dzegore, ichipa vanhu vazhinji zvese zvavanoda uye hapana chavasingaite.
Google Pixel 4a 5G ongororo: Sarudzo dzakangwara kupfuura iyo Pixel 5?
Google Pixel 4a: Zuva rekuburitsa, runyerekupe, maficha uye kudonha